N+ 300112 ဘာသာရေးဓမြတိုက်မှုကြောင့်အကျဉ်းချခံနေရသော ဓမ္မ၀ိဟာရီဆရာတော် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » N+ 300112 ဘာသာရေးဓမြတိုက်မှုကြောင့်အကျဉ်းချခံနေရသော ဓမ္မ၀ိဟာရီဆရာတော်
N+ 300112 ဘာသာရေးဓမြတိုက်မှုကြောင့်အကျဉ်းချခံနေရသော ဓမ္မ၀ိဟာရီဆရာတော်
Posted by nature on Jan 30, 2012 in Creative Writing | 26 comments
ဘာသာရေးဓမြတိုက်မှုကြောင့်အကျဉ်းချခံနေရသောဓမ္မ၀ိဟာရီဆရာတော် သည် ထေရ၀ါဒဗုဒ္ဓဘာသာအိမ်ကြီးကို အနုကြမ်းစီး ဓမြတိုက် အပိုင်စီးရန်ခပ်တည်တည် အိမ်ရှေ့တံခါးပေါက်ကို လာခေါက်သဖြင့် အကျဉ်းချခံနေရပြီဖြစ်ပါသည်။ သို့ပါသော်လည်း သူ၏ နောက်လိုက်တပည့်တပန်းများမှာနောင်တရ ကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိပဲ မလျှော့သော်ဇွဲဖြင့် နောက်ဖေးပေါက်မှသော်လည်းကောင်း ၊ ခွေးတိုးပေါက်မှသော်လည်းကောင်း ဆက်လက်ဝင်ရောက်၍ ဓမြတိုက်၇န်မပြတ်ကြံစည်လျှက် ရှိနေကြမြဲဖြစ်ပါသည်။ ပုထုဇဉ် သံဃာများ၏ အားနည်းချက် ပျော့ကွက်များကို ရှာဖွေအပြစ်တင်ရှုပ်ချပြီး ထေရ၀ါဒကို ယုံကြည်သူများအချင်းချင်း စိတ်ဝမ်းကွဲပြီး ယုံကြည်မှု ပျက်ပြားစေရန် အမျိုးမျိုး သပ်လျှိုသွေးခွဲလျှက်ရှိဆဲဖြစ်ပါသည်။ ထေ၇၀ါဒနှင့် သံဃာမဟာနာယက အဖွဲ့အစည်းကိုလည်း ပြည်သူများအထင်မှားစေရန်အမျိုးမျိုး ပုတ်ခတ်ဝေဖန် ရန်တိုက်ပေးလျှက်ရှိပါသည်။
ထိုကြောင့်ခွေးမြီးကောက်ကျည်တောက်စွပ်ဆိုသလို နောင်တရခြင်းမရှိပဲ ထေရ၀ါဒဗုဒ္ဓဘာအား ဓမြတိုက် အပိုင်စီးရန် ဆက်လက်၍ ကြံစည်နေသော ထေရ၀ါဒဗုဒ္ဓဘာသာအတွက်အန္တရာယ်ကြီးသော ဓမ္မ၀ိဟာရီဆရာတော်၏ ကျန်ရှိသောအပေါင်းအပါများကိုပါ အာဏာစက်နှင့် ဓမ္မစက်ပေါင်း ပြီး ဖမ်းဆီးအရေးယူသင့်ပါသည်။ မြွေပွေးဆိုသည်မှာ ခါးပိုက်ပိုက်ထားရန်မသင့်ပါ။ ယခုအချိန်သည်ထေရ၀ါဒ အားကောင်းသောအချိန်ဖြစ်သဖြင့် နှိမ်နှင်းရန် သင့်သောအချိန်ပင်ဖြစ်ပါသည်။
ဓမ္မ၀ိဟာရီဆရာတော်၏ လူ့မြုံးအယူအဆကြီးဖြင့် လူသားများအား သံသရာမှ မလွတ်စေရန်ထောင်ဖမ်း နေပါသဖြင့် ဓ္မ၀ိဟာရီဆရာတော်အားဖမ်းဆီးထားခြင်းသည် မြန်မာပြည်သူပြည်သားများအား ကယ်တင်ရာရောက်သဖြင့်ကုသိုလ်ရပါသည်။
“No men is perfect”ဆိုတဲ့အတိုင်းသံဃာတော်အများစုဟာလူထဲကဖြစ်လာကြတာပါ။
ကြောက်မှာလည်းမဟုတ်ပါဝူး ဘုံခန်းနဲ.မြှောက် ငရဲခန်းနဲ.ခြောက်လို.ပြောမှာဘဲ။လောကမှာဘုရားရှင်
ခေတ်ဘုရားကိုယ်တိုင်ကတောင်ချွတ်လို.မရတဲ့လူစားမျိုးတွေပေါ်ခဲ့တာပဲ။ သူတို.သေခါနီးလို.ဂတိနမိတ်ပေါ်လာမှဘဲသိရမှာဘဲ။ အဲဒါကတော့ဘယ်သူ. ဘယ်သူမှကြိုမသိဝူး။ကိုယ်တွေ.ကြုံလာမှသိလာမယ့်ကိစ္စတွေဘဲ။
“စာရထဘိက္ခဝေ စရိကံ”တဲ့ ဗုဒ္ဓက သူ့တပည့်တွေကို လောကသားတို့ အကျိုးစီးပွားအတွက် လှည့်လည် ဟောပြော (စည်းရုံး) ကြတဲ့။
အခုလည်း သူတို့ MG ရွာထဲမှာ လောကသားတို့ အကျိုးစီးပွားအတွက် လှည့်လည်ဟောပြောနေတာ ဘာမနာလိုဖြစ်နေရတာလဲ။
သူတို့ဘာသာ သူတို့ တန်ဘိုးသတ်မှတ်သွားမှာပါကွ။
ဈေးကွက်စီးပွားရေးခေတ်မှာ အယှဉ်ပြိုင်မခံနိုင်ရင် (ဘာသာရေး) ရွာထဲက ထွက်သွားတာ အကောင်းဆုံးပဲ။
လူတွေကို ဟိုမလေ့လာနဲ့ ဒီဟာလေ့လာလို့ လိုက်ချုပ်ချယ်နေစရာမလိုပါဘူးကွဲ့။
လိုချင်နေတာက ဒီမိုကရေစီ လုပ်နေတဲ့ဘာသာရေးက ချုပ်ချယ်မှုအပြည့်နဲ့ ဗဟိုဦးစီး။ ဒီပုံစံနဲ့ကတော့ ဒီမိုကရေစီနဲ့က ဝေး – – – – ။
မိမိ အယူဝါဒကို လွတ်လပ်စွာ မိမိအမည်ဖြင့် မတင်ပြဘဲ….
မိမိ အယူဝါဒကို ဗုဒ္ဓအယူဝါဒဖြစ်လေဟန် ….လှည့်စားကောက်ကျစ်ခြင်း၏ ရလာဒ်
ဘုရားဟော နှင့် အနီးစပ်ဆုံးဖြစ်သော
ထေရ၀ါဒဗုဒ္ဓဘာသာ ကျမ်းစာများ ကို မှားယွင်းသယောင်
မိမိစေတနာက မိမိကို အကျိုးပေးနေခြင်းဖြစ်ပါသည်။
(မှတ်ချက်။ ထေရ၀ါဒဗုဒ္ဓဘာသာ ကျမ်းစာများကို တိုက်ခိုက်နေသော်လည်း မိမိတို့ဝါဒနှင့် လိုသလို ဆွဲပြီးအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်လို့ရသော ထေရ၀ါဒဗုဒ္ဓဘာသာ ကျမ်းစာများထဲမှ စာသားအချို့ကိုမူ အကိုးအကားအဖြစ် လူအများယုံကြည်အောင် ယူပြလေ့ရှိသည်)
nature ဆိုတာ ဒကာလား/ဦးဇင်းလားတော့ မသိပါ။ ဦးဇင်းတို့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဆိုတာ ဗုဒ္ဓအဆုံးအမနဲ့ နေသူ၊ နေရမည့်သူတွေပါ။ ဗုဒ္ဓအဆုံးအမမှာ အပိုင်း(၃)ပိုင်းရှိပြီး သီလ၊ သမာဓိ၊ ပညာပါ။ ဒီသုံးပိုင်းမှာ သီလဟာ အရေးအကြီးဆုံးလို့ ပြောလိုပါသည်။ nature အနေနဲ့ ဓမ္မ၀ိဟာရီ ဆရာတော်ကို မကြိုက်ရင် မကြိုက်တာမှာတင် ရပ်နိုင်အောင်ကြိုးစားပါ။ သူ့ကို ပြန်ပြီး အမုန်းမပွားလိုက်ပါနဲ့၊ အဲဒီအမုန်းဟာ nature ကို ပြန်ပြီး ဒုက္ခပေးပါလိမ့်မယ်။ captainamerica ပြောသလို သူတို့မှားရင် သူတို့မှားတဲ့အတိုင်းဖြစ်ပြီး၊ ထေရ၀ါဒ ဦးဇင်းတွေမှားရင်လည်း မှားတဲ့သူ ခံရမှာပါပဲ။ ထုတ်ဖော်ပြောဆိုကြတာတော့ လူသားအားလုံးရဲ့ ကိုယ်ပိုင် အခွင့်အရေးပါ။ ဦးဇင်းတို့ စာသင်ရာမှာလည်း အခြားဘာသာအကြောင်းတွေနဲ့ ယှဉ်ပြီးသင်ကြားပေးတာ ခံရပါတယ်။ ဒီလိုယှဉ်ပြတာဟာ မှားတယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။ သူတို့ပြောတာမှာလဲ ယှဉ်ပြပြောဆိုတာ ပါနိုင်ပါတယ်။
ဒီလိုပြောလို့ သူတို့ဘက်ကလို့တော့ မထင်လိုက်ပါနဲ့၊ ဦးဇင်းတို့ သာသနာရဲ့ အဓိကအားနည်းချက်ဟာ အင်အားကို အားကိုးပြီး ဗုဒ္ဓအဆုံးအမနှင့် မကိုက်ညီသော အချက်များနှင့် တုန့်ပြန်ဖိနှိပ်ခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်တော်ထေရ၀ါဒ ဘာသာဝင်တစ်ယောက်ပါ ဒီနေ့ကစပြီး မိုးပြာကိုပြောင်းပါတော့မယ်
ကိုယ်လည်း မင်းနဲ့ ခပ်ဆင်ဆင်ပဲ။ နဂိုက ဘာဝါဒညာဝါဒတွေ သိပ်စိတ်ဝင်စားတာ မဟုတ်ဘူး။
ဗုဒ္ဓတရားအပေါ်မှာ သဘာဝကျကျဖွင့်ဆိုပေးရင် ဘယ်သူဖွင့်ဖွင့် ၀ါဒစွဲမပါပဲလက်ခံသွားမှာပဲ။
အခုကထေရ၀ါဒ တရားလွန်ဝါဒစွဲတွေနဲ့ “ကျားကျား မီးယပ်ပဲ” ဆိုပြီး လုပ်နေကြတော့ ကိုယ်တောင်မိုးပြာကို စွဲရမလိုဖြစ်နေပြီ။
ဒါပေမယ့် ဗုဒ္ဓကဟောခဲ့တယ်။ အယူဝါဒတစ်ခုခုကို စွဲနေရင် မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ ၆၂-မျိုးထဲက မလွတ်ဘူးတဲ့။
သို့ကြောင့် ကျွန်ုပ် မောင်ဂွသည် ဗုဒ္ဓတရားအပေါ်တွင် ၀ါဒစွဲတွေမပါပဲ လွတ်လပ်စွာလေ့လာနေပေတော့လေသတည်း။
အရင်ထဲက မိုးပြာ မဟုတ်ဘူးလားဗျ ?
သဘာဝကျတဲ့တရားဖက်ကနေ သဘာဝမကျတဲ့တရားတွေကို ၀င်ဂွကျတာနဲ့ပဲ မိုးပြာဖြစ်ရရောလား။
သဘာဝမကျပဲ တစ်ဖက်စောင်းနင်းနဲ့ ပြောနေရင် ထေရ၀ါဒ မကလို့ ၊ မဟာယာနဖြစ်နေပါစေ၊ နောက်ဆုံးမိုးပြာကိုက သဘာဝမကျတာတွေ ပြောလာရင်တောင် ငါ့အလုပ်က သဘာဝမကျရင်ဝင်ဂွကျရမှာပဲ Natureရဲ့။
Nature ရေ သူပြော၊ လူပြောအစွဲတွေနဲ့ လမ်းဆုံးမနေနဲ့။ ကိုယ့်နာမည်အတိုင်း သဘာဝမကျရင် ရဲရဲကြီးကို လက်မခံနဲ့ကွာ၊ ဒါမှ Nature ဆိုတဲ့ နာမည်နဲ့ထိုက်တန်မှာကွ။
ရွာထဲမှာတော့ပြောတိုင်းယုံရအောင် အ တဲ့သူတွေသိပ်မရှိဘူးထင်တာပဲ။ သူများကို ညာလို့ရပေမဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ညာလို့မရပါဘူး။
ပြောင်းလိုက်ပါ —ဗုဒ္ဓဘာသာမှာ လူသန့် သွားတာပေါ့–ဟုတ်ဘူးလား???
ကိုယ်အယူ အစကိုယ် လွပ်လပ်စွာ ပြောဆိုခွင့်ရှိ သင့်ပါတယ်
အများညီ လို့ ဤ ကကျွဲ မဖြစ်ပါ
အဲဒီ ကိုကိုပြာက ဘုရားထက်တက်တဲ့ ဘုရားဆရာဗျ
ထောင်ချထားတာ ကံက ချက်ချင်း အကြိုးပေးတယ်လို့ မှတ်တယ်
ဘ၀ကူးရင် ဒီ့ထက်ဆိုးမယ်မှတ်တယ် ကိုကိုပြာရေ
သူရို့ ကိုယ် သူရို့ အရိယာ ဘညာဟစ်ပြီး ဘာရည်ရွယ်ချက်နဲ့စောစောစီးစီး ဗုဒ္ဓသာသနာကို ကွယ်စေချင်နေသလဲ နားမလည်ဘူး
ကိုယ်ကိုယ်တိုင် တရားပေါက်နေပြီ အမှန်သိနေပြီဆိုရင် ကိုယ့်ဘာသာ ပေါက်သထက်ပေါက်အောင် ဆက်ပြီး ကျင့်ကြပါ
ပေါက်ကရ၀ါဒီတွေ လျှောက်ဖြန့် စေချင်ဘူး
အဲလောက်တာပြာချင်နေသပဆို မြန်မာနိုင်ငံထဲ မပြာနဲ့ ဗျာ
ကဲ ကျွန်တော်က ဆုတစ်ခုတောင်းတယ် ပြည့်လည်းပြည့်ချင်တယ် ဘာလည်းဆိုတော့ ဘုရားစစ်က ဟောသော တရားတော်စစ်ကို နာကြားခွင့်ရချင်ပါတယ်
သီရိလင်္ကာနိုင်ငံက သာသနာ ကို အားကျမိတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်း အဲဒီမှာလို သေချာ သင်ကြားပေးဖို့တော့ သင့်ပြီ။
အသိဥာဏ် နုသေးတဲ့ လူတွေ အတွက်တော့ အမှောင်လမ်းက ဆီးကြိုခြင်း ခံရတော့မှာပဲ..
ဘာပဲပြောပြော ကိုယ့်ဟာမှ ဘုရားဟော သူ့ဟာဘုရားဟော မဟုတ်ဘူးဟု အငြင်းပွားခြင်းသည် ဥပဒေသဘောမျိုးနှင့်ပြောရမည်ဆိုပါက တရားမမှု သဘောမျှသာဖြစ်ပေသည်။ ထေရဝါဒအယူနဲ့ ဖွင့်ဆိုပုံမတူတာနှင့်ပဲ ထေရဝါဒကို ထိခိုက်သည်ဟုဆိုကာ ဖမ်းဆီးခိုင်း ထောင်ချခိုင်းခြင်းမျိုးတော့ မလုပ်သင့်ပေ။
ယခင်အစိုးရက မဟနဘုန်းကြီးများ၏ တိုက်တွန်းပြောဆိုမှုကြောင့် အခြေအနေအရ ဘုန်းကြီးဦးဥာဏကို ထိန်းသိမ်းလိုက်ရသည်ဟုဆိုသော်လည်း ယခုအစိုးရသစ်သည် လူ့အခွင့်အရေးကို အလေးထားသော ဒီမိုကရေစီသို့ သွားနေခြင်းဖြစ်သည့်အတွက် တရားမမှုကို တရားမမှုအတိုင်းသာ စီရင်ဖို့သင့်ပေသည်။
ပိုစ့်ရေးသားသူ mgmaung ရဲ့
(အယူဝါဒကွဲလွဲမှုအပေါ် အယူဝါဒများဟောပြော၊ ယှဉ်ပြိုင်၊ ညှိနှိုင်းခြင်းတို့ဖြင့်သာ သမိုင်းတွင် ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြပါသည်/
တရားဓမ္မကို တရားဓမ္မများဖြင့်သာ ဖြေရှင်းသင့်ပါသည်/) ဆိုသော စကားရပ်လို
ဗုဒ္ဓဘုရားဟော အငြင်းပွားမှုကို အယူဝါဒများဟောပြော၊ ယှဉ်ပြိုင်၊ ညှိနှိုင်းခြင်းတို့ဖြင့်သာဆောင်ရွက်သင့်ပါသည်။
အင်္ဂလိပ်ခေတ်က ဘာသာမတူတဲ့ ခရစ်ယန်ဘာသာနဲ့တောင် ကျောက်ကွင်းအရေးတော်ပုံတွင် နှစ်ဘက်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ကြသေးတာ အခု ကိုးကွယ်ရာ ဘုရားတူတဲ့သူတွေက နှစ်ဘက်ယှဉ်ပြိုင် ပြောဆို၊ ချေပခွင့် မပြုပဲ တစ်ဖက်သတ် အတင်းအဓမ္မထောင်ချခိုင်းခြင်းသည် တရားသော လုပ်ရပ်မဟုတ်ပေ။
ဗုဒ္ဓတရားအပေါ် ကိုယ့်ဖွင့်ဆိုမှုကို ကိုယ့်အမှန်ဟု ရဲရဲရင့်ရင့် ယုံကြည်ပါက မိမိတို့နှင့် ဖွင့်ဆိုပုံမတူသော တရားများကို ပိတ်ပင်နေစရာ မလိုပေ။ လေ့လာသူများက သူ့တန်ဘိုးအတိုင်း သတ်မှတ်သွား မှာဖြစ်ပါသည်။
ယခုအခါ ကိုယ့်ဖွင့်ဆိုပုံနှင့်မတူသော တရားများကို အတင်းအားဓမ္မ လိုက်လံပိတ်ဆို့နေခြင်းကိုက ကိုယ့်အစဉ်အဆက် ဖွင့်ဆိုထားသည့် တရားတွေကိုက အားနည်းနေတဲ့သဘောဖြစ်နေလို့ ကိုယ်ကိုယ်တိုင် စိတ်မချတဲ့သဘောဖြစ်နေခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။
တရားကို တရားဖြင့်သာ ဖြေရှင်းသင့်ကြောင်း ၀င်ပါလိုက်ရပါသည်။
သာမာန်ပေါ့ပေါ့ဆဆလေးတွေးကြည့်ရင်တော့ တရားမမှုလိုပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ သေသေချာချာတွေးကြည့် ရင် ရာဇ၀တ်မှုပါပဲ ။ ရာဇ၀တ်မှုမှ သာမန်ရာဇ၀တ်မှု မဟုတ်ပါဘူး ။ လူအစုလိုက်အပြုံလိုက်သေအောင်လုပ်သလိုမျိုး အခြေခံမခိုင်သေးတဲ့ ထေရ၀ါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် အားလုံးကို ငရဲမီးလောင်တိုက်ထဲသွင်းမဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေပါ ။
ဒါတွေကို သိမြင်တဲ့ ဥာဏ်အမြှော်အမြင်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့ ထေရ၀ါဒဆရာတော်ကြီးတွေရဲ့လုပ်ဆောင်ချက်ကိုလည်း ချီးကြူးထောက်ခံပါတယ်။ အာဏာစက်နဲ့ ပံ့ပိုးပေးတဲ့ နိုင်ငံတော်ကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီ မီးလောက်တိုက်သွင်းမဲ့ဝါဒကြီးကို ဆရာကဖြန့်ရင် အပြစ်ဖြစ်ပြီး တပည့်ကဖြန့်ရင် အပြစ်မဖြစ်ဘူးလား။
နိုင်ငံတော်က အရိယာဖြစ်နေတဲ့ဓမ္မ၀ိဟာရ ဆရာတော်ကြီးကို တကိုယ်တည်း စိတ်အေးချမ်းစွာ အနှောက်အယှက်မရှိတရားကျင့်နိုင်အောင် စီစဉ်ပေးထားလို့ ကျေးဇူးတောင်တင်ရလေမလားပဲ။ ကျင့်ရင်းကျင့်ရင်နိဗ္ဗာန်ပဲေ၇ာက်မလား ။ငရဲပြည်ပဲရောက်မလားတော့မသိ။
ကိုယ်ကြိုက်တာကိုယ်ယုံလို့ရပါတယ် ။ ကိုယ့်ဟာကိုယ်ငရဲသွားချင်သွားပါ။ ထေရ၀ါဒဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေကိုအဖော်ခေါ်မခေါ်ပါနဲ့။
ကိုယ့်အယူအဆနဲ့မတူလို့ လိုက်လံပိတ်ဆို့နေတာမဟုတ်ပါဘူး။ ငရဲမီးလောင်တိုက်သွင်းမဲ့ဝါဒကြီးမို့
လယ်ပြင်မှာဆင်သွားသလို ထင်ရှားနေလို့ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကိုပဲဆင်ခြေရာ လိုက်ရှာနေဦးမယ်ဆိုရင်တော့ သူ့လောက်မိုက်တဲ့သူ ရှိမှာမဟုတ်တော့ပါဘူး။
ဒါပေမဲ့ လူတွေဟာ မုသာဝါဒကံတွေ ကျူးလွန်သူများလာတာနဲ့အမျှ ကျွန်တော်တို့မရှိတဲ့ တခေတ်မှာတော့ မိုးပြာဝါဒဟာအားကောင်းလာပါလိမ့်မယ်။
nature အနေနဲ့ ဓမ္မ၀ိဟာရီဆရာတော်ဟောကြားထားသည့် တရားများကို သေသေချာချာ အောက်ပါ လင့်များတွင် လေ့လာကြည့်ပါက မိမိနာလည်မှုလွဲမှားနေသည်ကို သိရပါလိမ့်မည်။
ဗုဒ္ဓမြတ်စွာပွင့်လာတာဟာ လူနတ်ဗြဟ္မာ သတ္တ၀ါများကို လောကီ လောကုတ္တရာ ၂ဖြာသော အကျိုးပွားစီးဖြစ်စေချင်လို့ ချမ်းသာစေချင်လို့ လို့ပွင့်လာတာပါ။ သတ္တ၀ါအပေါင်းသံသရာဝဋ်ဆင်းရဲက လွတ်မြောက်ပြီး နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကို ရရှိစေဖို့အတွက် မဂ္ဂင် ၈ပါး မြတ်တရားကို ဟောကြားခဲ့ပါတယ်။ တားမရလဲ သွားပေတော့ကိုသစ္စာရေ။ ကိုသစ္စာ တယောက် အမြင်မှန်ရပြီးကောင်းရာသုဂတိ လားပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။
လေ့ လာပြီးပါကြောင်း ခဗျာ————-
မြန်မာတွေ သွားနေတဲ့လမ်းက အေးချမ်း သာယာ ခေတ်မီ တိုးတက် ဖို့ 
မိုးပြာတွေသွားနေတဲ့လမ်းက နိုင်ငံသားတွေ အကျင့်ပျက်ဖို့ –ပြည်သူပိုင်ကို ခိုးတတ်ဖို့ -သူများသားမယား စော်ကားတတ်ဖို့ —-
ကြိုက်ပြီဗျာ..ကြိုက်ပြီ.. ကျုပ်က အရိယာ သစ္စာတွေ ဘာတွေ
ရှည်ရှည်ဝေးဝေး လေးလေးနက် သိပ်နားမလည်ဘူး..ဒါပေမဲ့လို့
မိုးပြာ ဦးဉာဏရဲ့ ငါးပါးသီလတော့ ကြိုက်သွားပြီဗျို့..။
လူမှုပတ်ဝန်းကျင်ကြီး တည်ဆောက်နိုင်မှာ ထင်ပါရဲ့။
ကျုပ်ကတော့ အခြေအနေမဲ့ တစ်ကောင်ဆိုတော့
ထေရဝါဒ ငါးပါးသီလ ဘယ်လုံမလဲ..မိုးပြာအရဆို ကျုပ်က ကုသိုလ်
တွေ ဘာတွေတောင်ရလို့ပါလား..ကျုပ်လိုကောင်စား အများကြီး
ဆိုတော့ …သောက်ကျိုးနည်း လူ့အန္ဓတွေကြားထဲ ကျုပ် ဆရာကြီး
(အရိယာ သစ္စာတွေ ဘာတွေ ပြောမနေနဲ့ဦး အရင်ဆုံး
အခြေခံ သီလပိုင်းကိုတင် Common Sense နဲ့ကြည့်ရင်
ဟိုက် မလွယ်ပါလားဗျို့ ။မိုးပြာတွေရော၊မပြာတာတွေရောပါကုန်ပီ။
အင်း ဘာသာရေးဆိုတာကို ဝေဖန်ဖို့ က တော်တော်ခက်ပါတယ်။
အဲဒီတော့ မဝေဖန်ဘဲနေတာ အကောင်းဆုံးဟုထင်မှတ်လျှက်။